Services – MGL Express
By webadmin Services Comments: no comments
စာထုပ/် ချောထုပ်များ ပေးပို့ရာတွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များ (၁) ပေးပို့သောစာထုပ်၊ ချောထုပ်များနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စအားလုံးကို ပေးပို့သူမှတာဝန်ယူရပါမည်။ (၂) လက်ခံပြီးသော စာထုပ်၊ ချောထုပ်များ အတွက် ငွေပြန်မအမ်းပါ။ (၃) ပေးပို့သော စာထုပ်၊ချောထုပ်များကို MGL မှ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း မှ ခိုင်မာသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တောင်းဆိုလာပါက ဖွင့်ဖောက်ေ အပ်ခွင့်ရှိသည်။ (၄) ပေးပို့သော၊ လက်ခံ ထားသော စာထုပ်၊ ချောထုပ်များအား MGL မှ အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရန် ငြင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ (၅)...
ကုမ္ပဏီများ၊ သံရုံးများ၊ အသင်းဖွဲ့များ၊ ဘဏ်များ၊ Supermarket များ၊ ရုံးဋ္ဌာနများအတွက် လချုပ်အထူးနှုန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Please fill out the following form with your message. We will review your request and follow up with you as soon as possible. [contact-form-7 id="822" title="BCS service"]
Home Delivery (online Shopping) E-commerce Onlineမှ မှာယူ ဈေးဝယ်သော ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း မှာယူသူထံအရောက် ပေးဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Please fill out the following form with your message. We will review your request and follow up with you as soon as possible. [contact-form-7 id="828" title="Home Delivery (Online Shopping) E-commerce...